Mitoka-Monina i Joseph Kabila Noho ny Fitarazohan’ny Fanomanana Fifidianana Taona 2018 · Global Voices teny Malagasy
Mitoka-Monina i Joseph Kabila Noho ny Fitarazohan'ny Fanomanana Fifidianana Taona 2018
Voadika ny 26 Marsa 2018 5:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Türkçe, Français
Limete, Kinshasa, RDC : Mpikambana ao amin'ny komitim-pifidianan'ny fandriampahalemana (mpitari-pikambanana sy fivavahana, tanora sy vehivavy) CC-BY-20
Anisan'ny tahirin-kevitra fanaraha-maso ny alohan'ny fifidianana any RDC ity lahatsoratra ity. Hita ato ny lahatsoratra voalohany momba izany.
Raha miharatsy ny toe-draharaha ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo, miezaka araka izay tratra maka ny fanohanana avy ao amin'ny faritra ny fitondran'i Kabila. mandritra izany fotoana izany, miezaka ny mamory vahoaka ny mpanohitra mba hanamafisana ny fikarakarana ny fifidianana.
Nisy taratasy lava dia lava tonga tao amin'ny biraon'ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana Antonio Guterres, mpandimby an'i Ban Ki-moon. Ny Comité Laïc de coordination (CLC) na ny Komitim-Pandrindrana Lahika ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo (RDC) tsy mahita izay iantorahana intsony no nanoratra izany taratasy izany. Nangataka ny hanavaozana ny iraka nampanaovina ny MONUSCO izany hoe ny Firenena Mikambana hiditra an-tsehatra ao RDC amin'ny fanombanana ny fifidianana ny Lahika Katolika. Misy ny fitakiana hamaranana hatreo ny fanendahana ny fahafaham-bahoaka sy (hamaranana ihany koa) ny fitazonana an'i Joseph Kabila eo amin'ny fahefana, toe-javatra iray efa tsy zaka intsony araka ny hevitr'izy ireo, satria efa nifarana tamin'ny taona 2016 ny fehim-potoana niasany. Mampitombo isa hatrany ny fihetsiketsehana ireo mpanohitra ny fitondrana hatramin'ny desambra lasa teo ary valian'ny polisy amin'ny fampiasan-kery izany.
Famoretana mahery vaika
Ho fanoherana ny tarehimarika nolazain'ny fitondrana, manombana ny vaomieram-panadihadiana iraisana 31 21 fa niteraka fahafatesan'ny mpanao fihetsiketsehana miisa 14, ka 12 no voan'ny bala ary roa sempotry ny etona mandatsa-dranomaso ny fihetsiketsehana tamin'ny 31 desambra sy tamin'ny 21 janoary. Olona efapolo mahery no nosamborina noho ny tondro-molotra ary nampijaliana nandritra ny fanaovana famotorana maherivaika. Lehilahy iray 35 taona mitondra ny anarana Rossy Mukendi Tshimanga no maty tamin'ny 25 febroary 2018, ary nisy ihany koa ny olona faharoa maty. Io vaomiera io dia napetraka ho eo ambany fitarihan'ny minisitry ny zon'olombelona tamin'ny voalohany febroary ary ahitana ireo delege misolo tena ny minisiteran'ny zon'olombelona, minisiteran'ny fitsarana, ny vaomieram-pirenena misahana ny zon'olombelona, ny firaisamonim-pirenena, ny biraon'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona sy ny Biraom-Pifandraisan'ny Vondrona Afrikana.
Tamin'ny 11 marsa lasa teo ity vaomiera ity no nandrisika ny governemanta :
hanaisotra ny fandraràna ankapobeny tsy hivory sy hanao fihetsiketsehana ankalamanjana ary hanome amin'ny Fitsarana ny fitaovana rehetra ahafahana mampanao fanadihadiana ara-pitsarana sy hanenjehana ireo mpanitsakitsaka ny zon'olombelona mifandraisaka amin'ireo fihetsiketsehana ankalamanjana tamin'ny 31 desambra 2017 sy tamin'ny 21 janoary 2018 ireo.
Andro vitsivitsy taorian'izany, tamin'ny 15 marsa, nangataka ny hanitarana ireo fandrisihana ireo amin'ireo orinasam-pifandraisandavitra ao amin'ny firenena ny IRDH (Institut de recherches en droits humains na Ivotoeram-Pikarohana momba ny Zon'Olombelona). Kinendry manokana amin'izany fangatahana izany ny fahatapahan'ny fidirana amin'ny aterineto iray andro mialoha ny isian'ny fihetsiketsehana.
Mitaky ny hanaovana fifidianana ny mpanohitra
Mandritra izany fotoana izany, mitaky hatrany ny hialan'i Kabila sy ny hanatontosaina haingana ny fifidianana ny hetsi-panoherana. Maro tamin'ireo mpitarika sy mpitolona ao amin'ny fanoherana no nandeha ho any Afrika Atsimo tamin'ny 12 marsa hivory miaraka amin'i Moïse Katumbi mandritra ny telo andro. Mazava ny hafatry ny kandidà : « Miaraka isika no hanolorako aminareo ny fananganana Congo hafa ». Faniriana iray hanao zavatra hafa, ary mazava ny antony.
Efa tamin'ny marsa 2016 io governoran'i Katanga teo aloha io no notondroin'ny G7, fiaraha-mientan'ny antoko mpanohitra, ho kandidà ka nataon'ny fitondrana ho lasibatra hatrany. Voaheloka higadra 36 volana sy voasazy ho tsy azo fidiana noho ny raharaha fangalaram-pananana mifaka (trano na tany) izay heverina ho nataon'ny eo amin'ny fitondrana hanenjehana azy, dia miaina an-tsesitany ranamana io nanomboka volana mey 2016. Tokony hiverina an-tanindrazana izy amin'ny volana jiona ahafahany mametraka ny taratasim-pirotsahany.
Fotoana fanararaotra io fivoriana maharitra telo andro io ho an'ny mpanohitra hanehoana ny fanohanany an'ilay mpanohitra 53 taona, izay mitaky ny hikarakarana fifidianana « azo inoana sy mangarahara ». Efa herinandro maromaro izay ny fitondrana no nanambara ny hametraka rafitra fifidianana elekitrônika, izay ampangain'ny mpanohitra ho fikasana hangalaram-bato.
Mihavitsy ny fanohanana ny fitondrana
Etsy ankilany kosa, mitady fanohanana i Kabila. Miezaka ny mandresy lahatra ireo firenena mifanolo-bodirindrina aminy ny fitondrana rehefa teren'ny Filankevi-Piarovan'ny Firenena Mikambana, izay manameloka ny fangejana, nilaozan'i Belzika mpiara-dia aminy ara-tantara izay nanapaka ny fifandraisan'ny roa tonta tamin'ny farany volana janoary, ary nampangain'ny Vondrona Eoropeana izay mitaky ny hanokafana famotoran'ny Fitsarana Adiheloka Bevava Iraisampirenena.
Tokony handeha ho any Kigali ny filoha tamin'ny 20 marsa, hanatrika ny fivoriana tsy ara-potoana an'ny Vondrona Afrikana. Na dia eo aza ny fandefasana mialoha solontena manana ny maha-izy azy, dia ny minisitry ny fitsarana Alexis Thambwe Mwamba, sy ny delegasiona heverina hikarakara ny kianja, dia sarotra ny asa.
Raha heverina ho mpiara-dalana ara-tantara amin'i Kabila i Paul Kagamé, filohan'i Rwanda, dia mihasarotra ho an'ireo Afrikana mpitondra ny firenena ankehitriny ny fanohanana azy. Maro tamin'ireo namana mahazatra an'i RDC no nisintaka tamin'ny fitondrana (kôngôley). Azo tononina amin'izany i Zimbabwe, i Angola, i Afrika Atsimo na i Botswana. Na dia miha-mitoka-monina aza i Kabila, dia tsy mihevitra ny hiala amin'ny fitondrana. Teo-draharaha mampanahy ireo mpamakafaka maro, izay manahy fa hilentika ao amin'ny kizo politika ny firenena.